Xaflad lagu Abaalmarinayay Cashuur Bixiyayaasha. - Cakaara News
Xaflad lagu Abaalmarinayay Cashuur Bixiyayaasha.
Jigiga(CN) khamiis, 4ta February, 2016, Xaflad balaadhan oo lagu abaalmarinayay hormuudka cashuur bixiyayaasha deegaanka ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee Qaryaan Dhoodaan Jigjiga.
Xafladaasi oo ay soo diyaarisay wakaalada dakhliga DDSI ayaa waxaa ka soo qayb-galay masuuliyiinta sare ee xukuumada DDSI oo ay ka mid tahay madaxwayne ku Xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiigiga ah ee DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax , golaha wasiirada DDSI, maareeyayaasha wakaaladaha DDSI, ganacsato iyo marti sharaf kale.
Waxaana furitaankii xafladaasi ka hadashay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah marwo Sucaad Axmed Faarax waxayna sharax dheerka bixiyay qorshayaasha horumarineed ee lagu xoojiyano kor u qaadida koboca dhaqaalaha oo ay sal u tahay ilaha dalkhliga deegaanka oo kor loo qaado si aan isku filnaansho u gaadho ugana maarano deeqaha dibadaha. Waxaa kale oo ay madaxwayne ku xigeenku sheegtay faa’iidooyinka ay leedahay cashuur bixinta, loona baahan yahay in ay cashuur bixiyayaashu rabitaankooda ku bixiyaan cashuurta ku waajibtay.
Xafladan oo halku dhig looga dhigay”cashuurta oo aad bixiso xiligeeda waa astaanta u hogaan-sanaanta sharciga ayaa waxaa xafladaasi ka soo jeediyay warbixino iyo waxqabadka wakaalada dakhliga masuulyiinta wakaalada dakhliga DDSI kuwaasi oo sheegay in Shantii sano ee la soo dhaafay wakaaladda Dakhliga DDSI oo garabsanaysa Xukuumaddaa ay samaysay dadaal aad u ballaadhan oo kor loogu qaadayo Dakhliga Deegaanka islamarkaasna lagaga midho dhalinayo Ilaha Dakhli taasi oo uu tilmaamay masuulku in ay si xawli ah kor ugu sii kacayay Dakhliga Deegaanka islamarkaana la hirgaliyya nidaamka maamulka cashuuraadka oo casri ah caddaaladina ay ku dheehantahay si guud ahaanba kharashka Deegaanka lagu daboolo Dakhliga laga soo saaro Deegaanka Gudihiisa.
Gabagabadii xafladan ayaa madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax iyo masuuliyiin kale ayaa abaalmarinta si wada jir u gudoonsiiyay ciid hormuudka u noqotay bixinta cashuur bixinta iyo hirgalinta nidaamka cashuur bixinta xafiisyo, ganacsato iyo shaqsiyaadba